Ọgụ ọkụ ọkụ, eriri USB nke okpomọkụ, Water Mist System - Anbesec
Linear Heat Detector na-enye ọrụ nchọpụta mkpuchi n’oge na gburugburu ebe echedoro. Linear Heat Detectors nwere ike ịchọpụta okpomọkụ ebe ọ bụla ogologo ha ma kee maka iji azụmaahịa na ngwa ọrụ.
Anbesec na-enye ngwaahịa asọmpi maka
mmanụ na petrochemical bases, ígwè na ígwè ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ike, ụzọ ụgbọ okporo ígwè na nnukwu ebe azụmahịa.
Linear Okpomọkụ nchọpụta USB NMS1001
Mmiri alụlụ ọkụ ...
Mmiri alụlụ-mgbapụta Unit
Mpaghara njikwa nchịkwa
Mmiri alụlụ nozzles
Mmiri alụlụ nozzles ...
Anbesec Technology Co., Ltd. hiwere na 2015. Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ a raara nye ntinye nke usoro nchekwa ọkụ na-akwụsị na nkwekọrịta ọrụ nchekwa ọkụ. Ka ụlọ ọrụ ahụ na-etolite, anyị akpọkọtala otu ndị ọkachamara ọkachamara na ụlọ ọrụ iji nye…